တပ်မတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအင်အားစု
မြန်မာ့တပ်မတော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့(စစ်တပ်) ၏ တရားဝင်အမည်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ထိန်းချုပ်ပြီး တပ်မတော် (ကြည်း)၊ တပ်မတော် (ရေ) နှင့် တပ်မတော် (လေ) ဟူသော တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ကြီး(၃)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး တပ်မတော်ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ လက်အောက်တွင် တိုက်ရိုက်ထားရှိပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်သော တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ရသည်။
ရဲသော် မသေ၊ သေသော် ငရဲမလား။
၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်
(နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ရက်စွဲ)
• တပ်မတော် (ကြည်း)
• တပ်မတော် (ရေ)
• တပ်မတော် (လေ)
• မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့
စစ်ရုံး၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ
၁၄,၇၄၇,၈၄၅ အမျိုးသား၊ အသက် အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)၊
၁၄,၇၁၀,၈၇၁ အမျိုးသမီး၊ အသက် အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)
၁၀,၄၅၁,၅၁၅ အမျိုးသား၊ အသက် အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)၊
၁၁,၁၈၁,၅၃၇ အမျိုးသမီး၊ အသက် အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)
၅၂၂,၄၇၈ အမျိုးသား (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)၊
၅၀၆,၃၈၈ အမျိုးသမီး (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)
၄၀၆,၀၀၀ (အဆင့် ကိုး)
$၂.၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၄)
၅၆ / ၂၂၄
၁၁၀ / ၄၄၀
လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည်မှစ၍ ယခုထိ တပ်မတော်သည် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်းစသော ပြည်နယ်များ၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တော်လှန်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဟူ၍ သာယာဝပြောသော လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းကြီးကို ပြင်းထန်စွာနှိပ်ကွပ်ပြီးနောက် တပ်မတော်သည် ၁၉၉၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပရန် သဘောတူ ကျင်းပပေးခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနိုင်ရရှိသောအခါ ထိုရလဒ်အား လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျဉ်းချခဲ့သည်။
၂၀၀၈ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းကာ ၂၀၁၀ ၌ တပ်ထောက်ခံပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို အာဏာရစေခဲ့၏။ ၂၀၁၅ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အလားတူ အနိုင်ရရှိပြန်သည်။ ၂၀၂၀ တွင် ကြံခိုင်ရေးပါတီက ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်သည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ မဲမသမာသည်ဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လူထုအစိုးရကို ဖယ်ရှားကာ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည်။ တပ်မတော်သည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်း၊ ပြည်သူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းများ အပါအဝင် လူ့အခွင့်ရေးဖောက်ဖျက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)အရ တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦးပါဝင်သည့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ လက်အောက်တွင် မူဝါဒအရ ကွပ်ကဲမှုကို ခံယူရသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးသည် ရာထူးအလျောက် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သည်။
၂.၂ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ (၁၉၄၇ - လက်ရှိ)
၂.၃ လက်ရှိ တပ်မတော်အကြီးအကဲများ
၃ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
၅.၁ တပ်မတော် (ကြည်း)
၅.၁.၁ ၁။ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး/ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)
၅.၁.၂ ၂။ စစ်ရေးချုပ်ရုံး
၅.၁.၃ ၃။ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး
၅.၁.၄ ၄။ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်ရုံး
၅.၁.၅ ၅။ စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၆ ၆။ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၇ ၇။ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၈ ၈။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၉ ၉။ စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၀ ၁၀။ ဆေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၁ ၁၁။ ဆက်သွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၂ ၁၂။ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၃ ၁၃။ တင့်ကားနှင့် သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၄ ၁၄။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၅ ၁၅။ ဒုံးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၆ ၁၆။ ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေး တပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၇ ၁၇။ တပ်မတော်အင်အားဖြည့်တင်းရေးတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၁၈ ၁၈။ တပ်မတော်မှတ်တမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၁၉ ၁၉။ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၀ ၂၀။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၁ ၂၁။ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၂ ၂၂။ ငွေစာရင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၃ ၂၃။ လုံခြုံရေးနှင့်ဆိုင်သောပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၄ ၂၄။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၅.၁.၂၅ ၂၅။ တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့
၅.၁.၂၆ ၂၆။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ
၅.၁.၂၇ ၂၇။ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်များ
၅.၁.၂၈ ၂၈။ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်များ
၅.၁.၂၉ ၂၉။ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်များ
၅.၂ တပ်မတော် (ရေ)
၅.၃ တပ်မတော် (လေ)
၅.၄ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့
၆ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရာထူး နှင့် အဆင့် အခေါ်အဝေါ်များ
၆.၁ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ (ရာထူး)
၆.၂ ရာထူးအဆင့်နှင့် အဆောင်အယောင်
၇ လက်ရှိ တပ်တွင်း လစာများ
၈ စစ်ဘက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာ့တပ်မတော် သမိုင်းကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှေးယခင်က အမြဲတမ်းတပ်မတော်ဟူ၍ မရှိဘဲ အနော်ရထာမင်းကြီး လက်ထက်မှစ၍ မြို့များကို ဆယ်ပြုမြို့၊ ရာပြုမြို့၊ ထောင်ပြုမြို့များဟူ၍ ဖွဲ့စည်းသည်။ စစ်ရေးပေါ်ပေါက်မှ ဆိုင်ရာမြို့များက ခွဲတမ်းကျစစ်သည်များ ထောက်ပံ့ရသည်။ ဗြိတိသျှတို့လက်အောက် ရောက်သွားသောအခါ အပျော်တမ်းတပ်များ တည်ထောင်ပေးခဲ့သော်လည်း ပုန်ကန်မည်စိုးသဖြင့် ဗမာလူမျိုးများကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်းစသည့် တောင်တန်းဒေသလူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများဖြင့် အဓိကထား ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ် ဖြစ်သောအခါမှ ဗြိတိသျှတပ်များသည် မေဆိုပိုတေးမီးယား စစ်မြေပြင်တွင် တူရကီတပ်များနှင့် အကြိတ်အနယ် ရင်ဆိုင်ရသောအခါ ဗမာလူမျိုးများကို စစ်တပ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုကာ စစ်မြေပြင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာတပ်သားများသည် မေဆိုပိုတေးမီးယား စစ်မြေပြင်တွင်ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။
ခေတ်သစ်စစ်တပ်၏အစမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စတင်ဖြစ်ပွားသောအခါ ဗြိတိသျှတို့အား လက်နက်ဖြင့် တော်လှန်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့သည် ဂျပန်၌ စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(BIA) ကို စတင်စုဖွဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ရာမှ ဗမာ့ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (BDA)၊ ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော် (BNA)၊ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ အခေါ်အဝေါ်အရ မျိုးချစ်တပ်မတော် (PBF) ဟူ၍ တစတစ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတပ်မတော်သုံးရပ်၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင် စစ်သေနာပတိသည် တပ်မတော်၏ မူလပထမ ဖခင်အစစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်သည်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲတွင် ပထမဆုံး ကျဆုံးခဲ့သူ ရှမ်းလူမျိုး သခင်ငွေ (ခေါ်) ဗိုလ်စောအောင်
သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြီးလျှင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ ဝါစဉ်အားဖြင့် ဗိုလ်လင်္ကျာ၊ ဗိုလ်စင်္ကြာ၊ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်နေဝင်း စသည်ဖြင့် ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကန္ဒီစာချုပ်အရ အမြဲတမ်း တပ်မတော်အဖြစ် ပြင်ဆင် စုဖွဲ့ခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်မှ ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးလောကသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သူရဲကောင်း ၆ ဦးသာ အမြဲတမ်း တပ်မတော်တွင် စစ်မှုဆက်ထမ်းခဲ့ကြသည်။ သခင်ထွန်းအုပ်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ဗိုလ်နေဝင်းသည် အမြဲတမ်း ဗမာ့တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်လက်ျာပြီးလျှင် နံပါတ် ၂ နေရာ ရခဲ့ပြီး ဗိုလ်ဇေယျက နံပါတ် ၃ နေရာရခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာ့အပျော်တမ်းလေတပ်အဖွဲ့ကို မြန်မာ့လေတပ်မတော်ဟုလည်းကောင်း၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင် မြန်မာပြည်ဘုရင့်အပျော်တမ်းရေတပ်အဖွဲ့ကို မြန်မာ့ရေတပ်မတော်ဟုလည်းကောင်း ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရေတပ်မတော်တွင် ပထမဆုံးအလံတင်သင်္ဘောမှာ မေယု စစ်သင်္ဘောဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်တင်ပြီးနောက်လွတ်လပ်ရေး ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ မြန်မာကြည်းတပ်မတော်၊ မြန်မာရေတပ်မတော်၊ မြန်မာလေတပ်မတော်များသည် ပွင့်သစ်စပန်းများကဲ့သို့ ငွားငွားစွင့်စွင့် ကိုယ့်အလံ၊ ကိုယ့်တံဆိပ်များဖြင့် တလူလူထွက်ပေါ်လာတော့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (၁၉၄၅ - ၁၉၄၇)​
ဗိုလ်မှူးချုပ် ဗိုလ်လက်ျာ (၁၉၄၇ - ၁၉၄၈)
ဗိုလ်ချုပ် စမစ်ဒွန်း (၁၉၄၈ - ၁၉၄၉)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း (၁၉၄၉ - ၁၉၇၂)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စန်းယု (၁၉၇၂ - ၁၉၇၄)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရတင်ဦး (၁၉၇၄ - ၁၉၇၆)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရကျော်ထင်(၁၉၇၆ - ၁၉၈၅)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် (၁၉၈၅ - ၁၉၉၂)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (၁၉၉၂ - ၂၀၁၁)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် (၂၀၁၁ - ယနေ့အထိ)
အင်ဒိုနီးရှားရောက် မြန်မာ့ရေတပ်သားများ (၁၉၆၀ ခုနှစ်)
မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကရင်လူမျိုး ဗိုလ်ချုပ် စမစ်ဒွန်း (၁၉၄၈ - ၁၉၄၉)
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ (၁၉၄၇ - လက်ရှိ)
၁ ဗိုလ်လက်ျာ ၁-၈-၁၉၄၇ ၁၃-၉-၁၉၄၈
၂ ဦးနု ၁၄-၉-၁၉၄၈ ၃-၄-၁၉၄၉
၃ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း ၄-၄-၁၉၄၉ ၉-၉-၁၉၅၀
၄ ဦးဝင်း ၁၈-၉-၁၉၅၀ ၁၅-၃-၁၉၅၂
၅ ဦးဗဆွေ ၁၆-၃-၁၉၅၂ ၄-၆-၁၉၅၈
၆ ဗိုလ်မှူး အောင် ၉-၆-၁၉၅၈ ၂၈-၉-၁၉၅၈
၇ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ၂၉-၉-၁၉၅၈ ၁၅-၃-၁၉၆၀
၈ ဦးနု ၁၆-၃-၁၉၆၀ ၂-၃-၁၉၆၂
၉ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ၃-၃-၁၉၆၂ ၂၀-၄-၁၉၇၂
၁၀ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စန်းယု ၂၁-၄-၁၉၇၂ ၇-၃-၁၉၇၄
၁၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး ၈-၃-၁၉၇၄ ၆-၃-၁၉၇၆
၁၂ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရကျော်ထင် ၇-၃-၁၉၇၆ ၂၇-၇-၁၉၈၈
၁၃ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ၂၈-၇-၁၉၈၈ ၁၉-၃-၁၉၉၂
၁၄ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၂၀-၃-၁၉၉၂ ၂၉-၃-၂၀၁၁
၁၅ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း ၃၀-၃-၂၀၁၁ ၇-၉-၂၀၁၂
၁၆ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် ၈-၉-၂၀၁၂ ၁၂-၈-၂၀၁၅
၁၇ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း ၂၅-၈-၂၀၁၅ ၁ -၂-၂၀၂၁
၁၈ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး ၁-၂-၂၀၂၁ ယ​နေ့ထိ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း - ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး - ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ​မောင်​မောင်​အေး - တပ်မတော်ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုး​အောင် - ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင် - ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)
မြန်မာ - အိန္ဒိယ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်များ တွေ့ဆုံစဉ် (၂၀၁၃ ခုနှစ်)
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်တွင် ကာကွယ်ရေးဌာန၊ မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ဌာနချုပ်၊ မြန်မာ့ရေတပ်မတော်ဌာနချုပ်နှင့် မြန်မာ့လေတပ်မတော်ဌာနချုပ်တို့ကို စုစည်း၍ စစ်ရုံးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်လက်ျာက ဝန်ကြီးအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံး တို့သည် ရန်ကုန်မြို့၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၇၇)၊ စစ်ရုံးဝင်းတွင် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စစ်ရုံး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဌာနသည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စစ်ရုံးမှ ကာကွယ်ရေးဌာန၊ အတွင်းဝန်ရုံး အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အတွင်းဝန်ရုံးတွင် ဌာနစု ၁၇ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အရာထမ်း ၁၀ ဦး၊ အမှုထမ်း ၁၃၅ ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား ၁၄၅ ဦးဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် စစ်ရုံးမှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမှာ ဦးဗဆွေ ဖြစ်၏။ ထိုသို့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၊ စစ်ရေးချုပ်ရုံး၊ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး၊ အတွင်းဝန်ရုံး(ကာကွယ်ရေး)၊ စစ်ရာထူးခန့် အတွင်းဝန်ရုံး၊ တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်ရုံး၊ ငွေစာရင်းရုံး(ကာကွယ်ရေး)များ ပါဝင်သည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လထိ အိမ်စောင့်အစိုးရကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသော ပြည်ထောင်စုပါတီ အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ တက်လာပြီးနောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်စွဲပါ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီကြေညာချက် အမှတ် ၉၇ အရ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ကာကွယ်ရေးဌာန၊ အတွင်းဝန်ရုံးကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှစ၍ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးအဖြစ် အဖွဲ့ခွဲ(၃)ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်း၍ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် ၇၇၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝင်းအတွင်း တည်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် ၄၄ ရှိ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်နေရာဟောင်း (ယခု ယုဇနဂါးဒင်းဟိုတယ်)နေရာသို့ ရုံးနေရာပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အဆိုပါရုံးနေရာမှ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မော်ကွန်းတိုက်လမ်းနှင့် မင်းကျောင်းလမ်းထောင့်ရှိ ခြံအမှတ် ၂၄ ပြန်လည်နေရာချထားရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး နေရာဟောင်းသို့ ရုံးနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အဆိုပါနေရာမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ နဝဒေးဝင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်၌ နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် ၂၀ သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်တွင် ရုံးအမှတ် ၂၄ သို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ ရုံးစိုက်ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံချင်းမတူဘဲ ကွဲပြားခြားနားလေသည်။ အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများသည် ၎င်းတို့၏လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဘုတ်အဖွဲ့များကို ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင်ထားရှိပြီး ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာမူ ဝန်ကြီးရုံး၊ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ၊ ရေး၊ ထောက် စသည့် ဦးစီးရုံးများနှင့် လက်ရုံးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပေါင်းစည်းဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ ဦးစီးရုံးများမှ လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ရုံးအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြလေသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး တပ်မတော် ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ လက်အောက်တွင် တိုက်ရိုက်ထားရှိပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သော တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ရသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင်သည့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ လက်အောက်တွင် မူဝါဒအရ ကွပ်ကဲမှုကိုခံယူရသည်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများ - တပ်မတော်(အခြေခံဥပဒေ) နှင့် တပ်မတော်အက်ဥပဒေများ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)၊ အခန်း(၇)၊ တပ်မတော် အခန်းပါ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိကအကျဆုံးသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အားပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရေးအတွက် တပ်မတော်က ဦးဆောင်ရမည်။ နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်လာလျှင် တပ်မတော်ကကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆိုပြု ထောက်ခံချက်ဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ မန်းဝင်းမောင် သည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော် (ကြည်း)အက်ဥပဒေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်(ရေ) (စည်းကမ်း) အက်ဥပဒေ၊ သို့တည်းမဟုတ်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်(လေ) (စည်းကမ်း) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေ ကိုထုတ်ပြန်​ကြေညာခဲ့သည်။ တပ်မတော်အက်ဥပဒေတွင်ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် စစ်မှုထမ်းအဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ စစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊ စစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးခံစားခွင့်များ၊ ပြစ်မှုများ၊ ပြစ်ဒဏ်များ၊ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းမပြုမီ မှုခင်းကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ စစ်တရားရုံးများလိုက်နာရမည့်ကျင့်ထုံးများ၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များ၊ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်များနှင့် ပြစ်ဒဏ်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းများ၊ ရေယာဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ နှင့် နည်းဥပဒေများ ပါဝင်သည်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေအရ စစ်တရားရုံး လေးမျိုးရှိသည် -
စစ်တရားရုံးချုပ် အသီးသီးတွင်၊ စစ်ဥပဒေအရာရှိတဦးပါဝင်ရမည့်ပြင်၊ တိုင်းစစ်တရားရုံး အသီးသီး၊ သို့တည်းမဟုတ် အကျဉ်းစစ်တရားရုံးချုပ်အသီးသီးတွင်လည်း စစ်ဥပဒေအရာရှိ တဦးပါဝင်သည်။ စစ်တရားရုံးတရုံး၏ အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးနှင့် စစ်ဥပဒေအရာရှိသည်၊ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းကိုမစမီ၊ ကျမ်းသစ္စာကိုဖြစ်စေ၊ ကတိ သစ္စာကိုဖြစ်စေ၊ ပြုရသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံး သည် နေပြည်တော် ၌ တည်ရှိသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တနည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအားလုံးကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည့် အာဏာဖြစ်သော ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာနေရာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း ကို တပ်မတော်က ရယူထားပြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်သည် ပြည်သူ့မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အရပ်သားအစိုးရ၏ ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းက ကာကွယ်ရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာနှင့် ပြည်ထဲရေး စသည့် ဝန်ကြီးဌာန (၃) မျိုးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ ယင်းဌာနတို့၏ ဝန်ကြီးချုပ်များသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ရွေးချယ်ထားသော တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် စစ်တပ်အရာရှိများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ 
တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များသည် ပါတီ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဟူသော စည်းကမ်းရှိသည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းခါစ ကာလက အယူဝါဒများ တပ်မတော်အတွင်း ကွဲပြားခဲ့သဖြင့် တပ်မတော် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ တချို့ တောခိုခြင်းသမိုင်းများ ရှိခဲ့၍ တပ်တည်မြဲ အမိန့်တွင် စစ်သည် အဆင့်အတန်း အားလုံးအား မည်သည့်နိုင်ငံရေး ပါတီနှင့်မဆို ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပါတီနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မလိုလားသော သဘောဖြင့် ဆန့်ကျင်မှု၊ လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်မှု၊ ဝိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှု၊ ဆူပူမှုအတွက် အားပေးအားမြှောက် ပြုခြင်းတို့ကို တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးအဖြစ် တပ်မတော်သားများကို လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်ပြုထားရာ ၎င်းတို့၏ စိတ်သဘောထားအရ မည့်သည်ပါတီကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် တပ်မတော်သားများနှင့် တပ်မိသားစုဝင်များသည် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တပ်စခန်းများရှိ မဲရုံများ၌ သူတို့ အထက်လူကြီးများ၏ စောင့်ကြည့်မှု အောက်တွင်သာ မဲပေးခဲ့ရသည်။ တပ်စခန်းများရှိ မဲရုံအများစုသည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများအတွက် အကန့်အသတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့၌ တပ်တွင်းမဲရုံများကို တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ ပြင်ပ သင့်လျော်သော နေရာတွင် ထားရှိရန် 'လွှတ်တော်အရပ်ရပ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်' အား အတည်ပြုခဲ့ရာ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ စတင်၍ တပ်မတော်သားများနှင့် တပ်မိသားစုဝင်များသည် တပ်ပြင်ပမဲရုံများတွင် မဲပေးခွင့်ရခဲ့သည်။
မြန်မာ ကြည်းတပ်သုံး T-72S တင့်ကား
ကျန်စစ်သား အမျိုးအစား စစ်ရေယာဉ်
ဤ sectionသည် စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်ကိုးကားချက်များ လိုအပ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်များ ကိုးကားထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ပြည့်စုံတိုးတက်လာအောင် ကူညီပေးပါ။ အကိုးအကားရင်းမြစ် မပါရှိသော အကြောင်းအရာများသည် စိန်ခေါ်ခြင်းခံရပြီး ဖယ်ရှားခံရနိုင်သည်။ (August 2021)
လေတပ်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား သမ္မတအိမ်တော်၌ တွေ့ရစဉ် (၂၀၁၇ ခုနှစ်)
ရှေးခေတ်က စစ်သည်ငါးဦးလျှင် တစ်အိုးစားဖြစ်ပြီး အကြပ်တစ်ယောက်က ကြီးကြပ်သည်။ ၎င်းအထက်တွင် သွေးသောက်၊ သွေးသောက်ကြီး၊ နာခံ၊ ‌ဗိုလ်စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ရှိကြသည်။ တပ်မှူးအဆင့်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏အထက်တွင် ဗိုလ်မှူးရှိသည်။
လက်ရှိတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာ တပ်စိတ်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်စိတ်တစ်စိတ်လျင် အင်အား(၁၀)ဦးရှိပြီး တပ်ကြပ်တစ်ယောက် ကွပ်ကဲသည်။ တပ်စိတ်(၃)စု လျင် တပ်စု(၁)စုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဗိုလ်ကြီး(သို့မဟုတ်)ဗိုလ်/ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် ကွပ်ကဲသည်။ တပ်စု(၃)စုလျင် တပ်ခွဲ(၁)ခွဲဟု သတ်မှတ်ပြီး ဗိုလ်မှူး (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦး ကွပ်ကဲသည်။ (၃) စိတ် (၁) စု၊ (၃) စု (၁) ခွဲ ပုံစံဖြစ်သည်။ အမေရိကန်စစ်တပ် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပုံစံတူညီသည်။ ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်းများတွင် တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲ(၄)ခွဲနှင့် ဌာနချုပ်တပ်ခွဲ(၁)ခွဲ၊ စုစုပေါင်း တပ်ခွဲ(၅) ခွဲပါဝင်ပြီး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက် ကွပ်ကဲသည်။ ဌာနချုပ်တပ်ခွဲတွင် တပ်ရင်းအကူပစ်လက်နက်ကြီးတပ်စု၊ မော်တော်ယာဉ်တပ်စု၊ ဆေးတပ်စု စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်းတစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမှာ အရာရှိ(၃၁) ဦး၊ အခြားအဆင့် (၈၂၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၅၇) ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မူလတပ်ရင်းများမှ ခွဲထုတ်၍ တပ်ရင်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် သောကြောင့် တပ်ရင်းအားလုံးနီးပါးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ လေးပုံတစ်ပုံ (အရာရှိ၊အခြားအဆင့် စုစုပေါင်း-၂၀၀ ဝန်းကျင်)သာရှိသည်။
ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်း(၁၀)ရင်းအား စုဖွဲ့၍ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်ယောက်မှ ကွပ်ကဲသည်။ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်(တမခ)တစ်ခု (သို့မဟုတ်) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်(စကခ)တစ်ခုစီတွင် ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက်စီကွပ်ကဲသော နည်းဗျူဟာစစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့(နဗဟ)(၃)ခုစီ ပါရှိသည်။ စစ်နယ်ဝှန်းအခြေအနေအရ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (၁၄) ခုရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်မှ ကွပ်ကဲသည်။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ၏လက်အောက်တွင် အခြေချစစ်ဗျူဟာ(စဗခ)များနှင့် လှုပ်ရှားစစ်ဗျူဟာများရှိကြသည်။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သည် မိမိစစ်နယ်ဝှန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော တမခ၊ စကခတပ်များကိုလည်း ကွပ်ကဲရသည်။ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် တစ်ခုစီတွင်ကွပ်ကဲမှုအောက် တပ်ရင်း(၁၀)ရင်းစီရှိသော်လည်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်များကတော့ တပ်တည်မှုအနေအထားပေါ်မူတည်က လက်အောက်ခံတပ်ရင်းအရေအတွက် မတူညီကြပေ။
၂၀၀၆ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် တိုင်းမှူး အသစ်များဖြင့် တပ်မတော်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)စစ်ဦးစီးကွပ်ကဲမှုဌာနချူပ်ဖြစ်သော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကို ရန်ကုန်မြို့မှ နေပြည်တော် သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
မြန်မာရေတပ်သုံး အစ္စရေးထုတ် Super Dvora MK III အမြန်သွား ကင်းလှည့်စစ်ရေယာဉ်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော် (ကြည်း)
တပ်မတော်(ကြည်း)၏ အကြီးအကဲသည် “ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်/ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)” ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်၌ ၎င်းရာထူးအထက်တွင် “တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်” သာ ရှိလေသည်။
တပ်မတော်(ကြည်း) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -
စစ်ဦးစီး/ စစ်ရေး/ စစ်ထောက် ဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်ရုံးများ။
လက်ရုံး/ ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ အရာရှိချုပ်ရုံးများ။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)၊ လက်ရုံး/ ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ။
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် - (၁၄)ခု။
ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် - (၁၀)ခု။
စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - (၂၀)ခု။
ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် - (၆)ခု။
၁။ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး/ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)
တပ်မတော်(ကြည်း)၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ရုံးဖြစ်ပြီး ကြည်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးသည် ဤရုံး၏ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင်ရှိသည်။ ရာထူးတာဝန်ခန့်အပ်မှုတွင် “ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်/ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)” သည် အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်ပြီး “တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်” ရာထူးကိုလည်း ‘တပ်မတော်(ကြည်း)’ မှ အရာရှိကြီးများကိုသာ ခန့်အပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ပြင် တပ်မတော်(ရေ) နှင့် တပ်မတော်(လေ) တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းများဖြစ်သော စစ်ရေး၊ စစ်ထောက်ပိုင်းများကိုပါ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ရသည့်အတွက် တနည်းဆိုရသော် အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံတွင် ကက(ရေ) နှင့် ကက(လေ) တို့၏ အထက်တွင်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်(ကြည်း/ ရေ/ လေ) အားလုံး၏ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအခြေအနေများအား “တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး” သို့ အစီရင်ခံတင်ပြပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်(ကြည်း) ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ကျယ်ပြန့်ပြီး ရှုပ်ထွေးသည်။ ကက(ကြည်း) ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရသော ရုံးအတွင်းရှိ ဌာနကြီးနှင့် ပါဝင်သောဌာနများမှာ -
တပ်မတော်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာနချုပ် (မှတ်ချက်- ရုံးအတွင်းရှိ ဌာနကြီးမဟုတ်သော်လည်း ကက(ကြည်း)မှ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲသော ဌာနချုပ် ဖြစ်သည်)
ကကရေး သည် စစ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ စီမံခြင်း နှင့် ညွှန်ကြားခြင်းတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်ရသည်။ အောက်ပါ အရာရှိချုပ်ရုံးများသည် လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် ဤရုံး၏ အောက်တွင်ရှိသည် -
ကကထောက် သည် စစ်ထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ စီမံခြင်း နှင့် ညွှန်ကြားခြင်းတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်ရသည်။ စစ်ထောက်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင် “ကကယာ၊ ကကပံ့၊ ကကနက် နှင့် ကကလျှပ်” လက်ရုံး/ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ တို့သည် ဤရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင်ရှိသည်။
၄။ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်ရုံး
လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် တပ်မတော် တက္ကသိုလ်များ၊ သင်တန်းကျောင်းများ အားလုံးသည် ဤရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့
၂၀၀၄ ခု အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် နည်းဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာနကြီး (The Office of Strategic Studies) နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး (Defence Service Intelligence) ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် အား ထုတ်ပယ်စဉ်မှစ၍ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သော တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိချုပ်ရုံး နေရာကို ပြန်လည် အစားထိုးရန် တပ်မတော် စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ရုံးကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်၎င်း၊ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအကူတပ်များ၊ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်၎င်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တပ်မတော်စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရုံးချုပ်ဌာနကြီး (၆) ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာနကြီး (ပြည်တွင်း)
စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာနကြီး (ပြည်ပ)
စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာနကြီး (တန်ပြန်)
စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာနကြီး (နည်းပညာ) တို့ဖြစ်သည်။
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - (၉)ခု
အထူးဆောက်လုပ်ရေး စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - (၁)ခု
၁၂။ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
၁၃။ တင့်ကားနှင့် သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့
သံချပ်ကာ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - (၅)ခု
ဒုံးစစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - (၁)ခု
၁၆။ ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေး တပ်ဖွဲ့
၁၈။ တပ်မတော်မှတ်တမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၁၉။ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၂၀။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၂၁။ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၂၂။ ငွေစာရင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၂၃။ လုံခြုံရေးနှင့်ဆိုင်သောပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
၂၄။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
မြန်မာ့ ဒုံးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့သုံး မိုင်၃၀၀ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်သော Hwasong-6 ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် များသည် စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်များ၌ သက်ဆိုင်ရာ ကစထ များ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိပြီး ကျန် (ဦး/ရေး/ထောက်)လုပ်ငန်းများတွင်မူ သက်ဆိုင်သည့် အရာရှိချုပ်ရုံးများသို့ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံတင်ပြရသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) လက်အောက်ရှိ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) လက်အောက်ရှိ ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
လက်ရှိ၌ ဖွဲ့စည်းထားပြီးသော စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် များမှာ (၂၀)ခု ရှိပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
“စကခ (၁၁) အား ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘဲ စကခ (၂၁) ကိုသာ ဖွဲ့စည်းထားသည်”
ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်(ဒကစ)များသည် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်အလှမ်းဝေးသောဒေသရှိတပ်များကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုယ်စား ထိရောက်သောအုပ်ချုပ်မှုပေးနိုင်ရန်၊ မဟာဗျူဟာအရအရေးပါသော်လည်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖွင့်လှစ်ရန်မလိုအပ်သည့် ဒေသများကို ကွပ်ကဲနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကာဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူး(ဒကစမှူး)အဖြစ် ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိ အရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ တာဝန်ယူသည်။ ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်များ၏လက်အောက်ခံတပ်ရင်းအရေအတွက်သည် တပ်တည်ပုံအနေအထားအရ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီကွာခြားမှုရှိသည်။ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၊ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကဲ့သို့ ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်း(၁၀)ရင်းမရှိသော်လည်း ထူးခြားမှုမှာ အခြားတပ်မှူး၊ စကခမှူးများမရရှိသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဒကစမှူးများက ရရှိသည်။ ဒကစအုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲရာနယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားသော တပ်များကို အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲခွင့်ရရှိသည်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးသော ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ် (၆)ခုရှိပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော် (ရေ)
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော် (လေ)
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရာထူး နှင့် အဆင့် အခေါ်အဝေါ်များ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၏ ရာထူးအလိုက် အပွင့်များ
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ (ရာထူး)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (Commander in Chief of Defense Services)
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (Deputy Commander in Chief of Defense Services)
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (Minster of Ministry of Defense)
ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) (Joint Chief of Staff ( Army, Navy ,Air))
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) (Commander in Chief (Army))
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) (Commander in Chief (Navy))
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) (Commander in Chief (Air))
စစ်ဆင်ရေးအထူအဖွဲ့မှူး (Chief of Special Operation Bureau)
စစ်ရေးချုပ် (Adjutant General)
စစ်ထောက်ချုပ် (Quartermaster General)
စစ်ရာထူးခန့်ချုပ် (Military Appointments General)
စစ်ဥပဒေချုပ် (Judge Advocate General)
စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် (Chief of Military Security Affairs)
တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ် (Chief of Armed Forces Training)
တပ်မတော်စစ်ဆေးရေး အရာရှိချုပ် (Defense Services Inspector General)
စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် (ကြည်း) (Chief of Staff (Army))
စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) (Chief of Staff (Navy))
စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (လေ) (Chief of Staff (Air))
တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် (Vice Adjutant General)
တွဲဖက် စစ်ထောက်ချုပ် (Vice Quartermaster General)
တပ်မတော် တပ်ထိန်းချုပ် (Provost Marshal)
စစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Ordinance)
စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Military Engineering)
ဆေးဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Medical Services)
ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Signal)
ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Defense Services Procurement)
ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of People Militias and Frontier Forces)
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of People Relation and Psychological Welfare)
ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Resettlement)
သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Armor)
အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး (Director of Artillery)
ကျောင်းအုပ်ကြီး ( နကတ/ဥစတ/ စတသ)
ကျောင်းအုပ်ကြီး ( တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ( နကတ/ဥစတ/ စတသ)
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ( တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
နည်းပြအရာရှိချုပ် ( စတသ/တနတ/ တနတ/တဆတ/တသဆ/ ဗသက/ တခရ /တအက/တတက)
စစ်ဗျူဟာမှူး (Tactical Operation Command)
တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီး (Quarter Master)
ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ (Intelligence Officer)
ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ (Signal Officer)
ဆေးမှူး (Medical Officer)
ဆေးလက်ထောက် အရာခံဗိုလ် (Medical Assistant)
တပ်ရင်းတပ်ထောက် အရာခံဗိုလ် (Regimental Quarter Master Sergeant)
ရုံးအုပ်ကြီး (Head Clerk)
တပ်စာရင်းကိုင် (Unit Accountant)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ် ဒုတိယ
Senior General Vice Senior General General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး တပ်ကြပ် ဒုတိယ
Class-1 Warrent Officer
Staff Sergeant Corporal Lance
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (Senior General)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (Vice Senior General)
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Lieutenant General)
ဗိုလ်ချုပ် (Major General)
ဗိုလ်မှူးချုပ် (Brigadier General)
ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး (Lieutenant Colonel)
ဒုတိယ ဗိုလ် (Second Lieutenant)
အရာခံဗိုလ် (Warrant Officer I)
ဒုတိယ အရာခံဗိုလ် (Warrant Officer II)
တပ်ခွဲ တပ်ကြပ်ကြီး (Quarter Master Sergeant)
ဒုတပ်ကြပ် (Lance Corporal)
လက်ရှိ တပ်တွင်း လစာများ
အစိုးရအဖွဲ့ဟာ လွှတ်တော်ရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ၂၀၁၅ - ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလက စပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တပ်မတော်သားများကို လစာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
တပ်သား တဦးလျှင် ဝင်ဝင်ခြင်း ကျပ် ၁၄၄၀ဝ၀ ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး
တပ်ကြပ် တဦးလျှင် ၁၈၆၀ဝ၀၊
တပ်ကြပ်ကြီး တဦးလျှင် ၂၀၄၀ဝ၀၊
ဒုအရာခံ ဗိုလ်တဦးလျှင် ၂၄၀၀ဝ၀၊
ဒုဗိုလ်တဦးလျှင် ၃ သိန်း၊ ဗိုလ်တဦးလျှင် ၃ သိန်း နှစ်သောင်း၊
သုံးပွင့်အဆင့်ရှိ ဗိုလ်ကြီးတဦးလျှင် ၃ သိန်း ၅ သောင်းမှ သုံးနှစ်သက်တမ်းရှိပါက နှစ်တိုး ကျပ် ၄၀၀၀၊
ဗိုလ်မှူးတဦးလျှင် ၃ သိန်း ၉ သောင်း၊
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ၄ သိန်း ၅ သောင်းမှ၊
ဗိုလ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ၅ သိန်း ၅ သောင်း၊
ဗိုလ်မှူးချုပ် တဦးလျှင် ၇ သိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် တဦးလျှင် ၁၀ သိန်း၊
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးလျှင် ၁၅ သိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဦးလျှင် ကျပ် ၂၀ သိန်း၊
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ကျပ် ၂၅ သိန်းနှင့်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ကျပ် ၃၀ သိန်း သတ်မှတ်ထားသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး_အရာရှိချုပ်ရုံး
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)များအနေဖြင့် တပ်မတော်သုံး လက်နက်ငယ်များ၊ လက်နက်ကြီးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ လက်ရှိ မြန်မာ့တပ်မတော်က အသုံးပြုနေသော လက်နက်ခဲယမ်းများသည် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)များ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သောလက်နက် အများစုဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း(MEC) ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက် (UMEHL) ကို စစ်မှုထမ်းများ သက်သာချောင်ချိရေး အတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကျပ်ငွေ ၁၀ ဘီလီယံအသုံးပြု မတည် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာများမှာ လက်ရှိ ထိပ်တန်း တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် တချို့နဲ့ အတူ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ကြသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် MEC ၏ ဉက္ကဌဖြစ်သည်။ MEHL နှင့် MEC တို့က ပိုင်ဆိုင်သော စီးပွားရေးကဏ္ဍအမျိုးပေါင်းစုံတွင် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကျောက်မျက်ထုတ်ယူရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစသည့် ကဏ္ဍတို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း အနည်းဆုံး(၁၂၀)ခု မျှထိ ပါဝင်သည်။ 
↑ Wudunn၊ Sheryl။ "New 'Burmese Way' Relies On Slogans From the Military (Published 1990)" (in en-US)၊ The New York Times၊ 1990-12-11။
↑ "Myanmar's 2015 landmark elections explained" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2015-12-03။
↑ ၃.၀ ၃.၁ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23475&LangID=E
↑ http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf Ministry of Information. September 2008
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 12 October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 12 October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)၊ စာမျက်နှာ (၁၄၇-၁၄၈)။
↑ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်အမတ်များက ဥပဒေပြုရေး၌ အထောက်အကူပေးနိုင်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြော။
↑ မိုးဇေညိမ်း။ "ဘာလဲဟဲ့ စရဖဆောင်းပါး"။ ဘာလဲဟဲ့ စွမ်းအားရှင်။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။9October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး Archived 22 September 2020 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တပ်မတော်&oldid=736700" မှ ရယူရန်
၅ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။